Iindaba -Ulwazi ngeoyile yokutya
1. Yitya. Sesinye sezona zondlo zintathu ziphambili (iicarbohydrate, iprotein kunye neoyile) ekufuneka umzimba womntu ungasweli. Ukusetyenziswa yenye yeempawu zomgangatho wokuphila. Ukubonelela ngamafutha acid, iivithamini ezinyibilikayo ezinamafutha kunye neemeko zokufakwa kweevithamini ezinamandla, amandla, ukuphucula incasa.
2. Ushishino. Ipeyinti, amayeza, ioyile yokuthambisa, idizili yebio, njl. Iziphumo zayo zisetyenziswa kumacandelo amaninzi emizi-mveliso.
3. Yondla. Izilwanyana zifuna ngaphantsi. Izityalo azidingi konke konke. Izityalo zeoyile kunye nezinye izilwanyana zizityalo zebhayoloji ezenza iioyile kunye namafutha.
Uloyiko olune: ubushushu, ioksijini, ukukhanya (ngakumbi i-ultraviolet), ukungcola (ngakumbi ubhedu, kulandele intsimbi, yeyona nto ibangela ukonakala kweoyile).
Okwangoku, iinxalenye zezilwanyana kunye nezityalo kunye nezinto ezincinci ezinomthamo weoyile ongaphezulu kwe-10% zihlala zisetyenziswa njengeoyile yokwenza ioyile, kwaye iindawo ezithwala ioyile zezityalo ngokubanzi ziyimbewu kunye nomgubo.
1, oyile yemifuno:
1) Ioyile yeherbaceous: isoya, ipeanut, rapeseed, sesame, cottonseed (izityalo zeoyile ezinkulu ezintlanu eChina), njl.
2) Ioyile enkuni: intyatyambo yesundu, iziqhamo; ikhokhonathi, iziqhamo; Iziqhamo ze-olive, i-kernel, njl., Imbewu ye-Tung yahlukile e-China.
3) Ngu iimveliso: irayisi bran, ingqolowa germ, ingqolowa germ, imbewu iidiliya, njl
2. Isalathiso somgangatho weoyile yezityalo
1) Umxholo weoyile iyonke (ngaphandle kweDaza).
2) Umxholo wokufuma.
3) Umxholo wokucoceka.
4) Umxholo weenkozo ezingafezekanga.
5) Umlinganiselo wokungunda (ixabiso leasidi enamafutha).
I-6) Ireyithi ye-kernel echanekileyo yeoyile ekhuselweyo.
Inkqubo yokuvelisa ioyile
1. Inkqubo yesibini yokwenza ioyile.
2. Phambili inkqubo yokushicilela.
3. Inkqubo ngqo yokutsala.
4. Inkqubo yokwenza ioyile enye cinezela.
Izinto ezahlukeneyo zokwenza izinto zinenkqubo ezahlukeneyo zokwenza ioyile
Ezona nkqubo ziphambili zemveliso yeoyile zezi zilandelayo:
1. Iimbotyi zesoya: kukho inkqubo yokukhupha ixesha elinye kunye nenkqubo yokubandayo ebandayo. Ngenxa yeemfuno ezahlukeneyo zekhwalithi yesidlo seembotyi zesoya, ukukhutshwa kwexesha elinye kuye kwaxobuka, ukwanda kunye nenkqubo yokuchithwa kobushushu obusezantsi.
2. I-rapeseed: ngokubanzi inkqubo yangaphambi kokushicilela, kukho i-peeling, inkqubo yokwandiswa kokukhupha.
3. Ipeanut kernel: ngenxa yeenkqubo ezahlukeneyo zokwenza ioyile, inokuvelisa ioyile yamandongomane kunye neLuzhou flavour oyile yamandongomane.
4. ICottonseed: inkqubo yokukhutshwa kwangaphambi kokushicilelwa kunye nenkqubo yokwandiswa kokukhutshwa, inkqubo yokukhutshwa inesinyibilikisi esinye esiqhelekileyo kunye nenkqubo ye-levent solvent.
5. I-Sesame: ngenxa yenkqubo eyahlukileyo yokwenza i-oyile, kukho ioyile yesesame eqhelekileyo, ioyile yesame eyenziwe ngomatshini kunye neoyile ye-Xiaomo yesame.
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Umthengisi weoyile, Ingqele Cofa Umatshini weoyile, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive, Umatshini wokushicilela weoyile encinci, Imbewu yeNtengiso yeoyile, Umatshini wokushicilela ioyile,